Cuba uye nekwakabva zita rayo | Absolut Kufamba
Cuba uye nekwakabva zita rayo
Daniel | | Kiyuba
Icho chitsuwa chikuru kwazvo muAntilles uye imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushanya muCaribbean. Iyo yakasarudzika uye yakakosha nzvimbo yezvikonzero zvakawanda uye ine yakareba uye inonakidza nhoroondo. Asi, Zita reCuba rinobva kupi? Chii chakabva zita rayo? Uyu ndiwo mubvunzo watichaedza kugadzirisa mune ino posvo.
Ichokwadi ndechekuti iyo etymological mavambo ezwi Kiyuba haina kunyatsojeka uye ichiri nyaya yekukakavadzana pakati pevadzidzi nhasi. Iko kune akati wandei fungidziro, mamwe anogamuchirwa kupfuura mamwe, uye mamwe acho anonyatsoda kuziva.
Chekutanga pane zvese, yakakosha pfungwa inofanira kujekeswa: riini Christopher Columbus Akasvika pachiwi kekutanga (musi waGumiguru 28, 1492), hapana nguva yaakambofunga kuti ari kutsika kondinendi nyowani. Muchokwadi, maererano nekuverenga kwavo kwakanganisa, iyo nyika nyowani yaigona kungove Cipango (sekuzivikanwa kwaiitwa Japan panguva iyoyo), iyo mukana wekubhabhatidza chitsuwa nenzira ipi neipi isina kutariswa.
Christopher Columbus akasvika pachitsuwa ichi Gumiguru 28, 1492, achinzwa kekutanga izwi rekuti "Cuba" kubva mumiromo yevagari vemo.
Makore gare gare, veSpanish vakasarudza kutumidza kuwanikwa uku kune zita re Juana chitsuwa, mukuremekedza muchinda mudiki John, iye ega mukomana mukomana Reyes CatÃ³licos. Zvisinei, zita iri harina kubata. Pasina mubvunzo, izvi zvakakanganiswa nenyaya yekufa nguva isati yakwana muna 1497 yemunhu akadaidzwa kuzova mutsivi wekorona, pazera remakore gumi nemapfumbamwe.
Mushure mezvo, kuburikidza nemutemo wamambo waFebruary 28, 1515, kuyedza kwakaitwa kuti zita repamutemo reCuba raive iro Chiwi cheFernandina, mukukudza mambo, asi zita renzvimbo harina kubata. Muchokwadi, zviito zvepamutemo zvehafu yepiri yezana ramakore rechiXNUMX zvatove zvinongoreva nzvimbo ino pasi pezita reCuba.
1 Zvizvarwa zvemo
2 Inoda kuziva fungidziro nezvekwakabva izwi rekuti Cuba
2.1 Dzidziso yechiPutukezi
2.2 Dzidziso yeArabhu
Nhasi uno tsananguro inogamuchirwa yemubvunzo wekuti "zita reCuba rinobvepi" ndeye iyo chizvarwa chekutanga.
MaCuba mazhinji anoda pfungwa yekuti zita renyika yavo rinobva pazwi rekare revanhu: kuba, yakashandiswa pamwe mumutauro unotaurwa ne Taínos. Izwi iri raizoreva "Nyika" kana "gadheni." Zvinoenderana nedzidziso iyi, angave ari iye Columbus pachake angadai akanzwa sangano iri kekutanga.
Uyezve, zvinokwanisika kuti izwi rimwe chete iri raishandiswa nevamwe vanhu vechiAborigine vezvimwe zviwi zveCaribbean, vane mitauro yakabva kumudzi mumwe chete, mhuri yemitauro yeArauca.
Zita reCuba rinobva kupi? Maererano nedzimwe nyanzvi, zvinogona kureva kumakomo uye kukwirira
Mukati meiyo imwecheteyo yemuno fungidziro, pane mumwe musiyano unoratidza kuti zvinorehwa nezita iri zvinogona kuenderana nenzvimbo dzinowanikwa nzvimbo dzakakwirira nemakomo. Izvo zvinoita sekuratidzwa nemamwe mazita enzvimbo akakodzera ku Cuba, Haiti uye Dominican Republic.
Ivo baba Bartholomew weDzimba, uyo akapinda mukukunda pamwe nekuparidza evhangeri kwechitsuwa ichi pakati pa1512 na1515, anonongedza mumabasa ake kushandiswa kwemazwi "cuba" uye "cibao" semazwi anoreva mabwe makuru nemakomo. Kune rimwe divi, kubvira ipapo uye nanhasi zita rechizvarwa re Cubanacan kunzvimbo dzemakomo dziri pakati penyika nekuMabvazuva.
Saka zita reCuba raizove rimwe rezviitiko izvo nzvimbo inopa zita rayo kunyika. Nehurombo, kushaikwa kwedu kweruzivo nezve mitauro yeTaíno neAntillean kunotitadzisa kubva mukusimbisa izvi zvakanyanya kusimbisa.
Inoda kuziva fungidziro nezvekwakabva izwi rekuti Cuba
Kunyangwe paine kumwe kubvumirana pakati pevanyori vezvakaitika kare uye nyanzvi dzemitauro nezvekuti zita reCuba rinobva kupi, kune zvimwe zvinokatyamadza pfungwa izvo zvakakodzera kutaura nezvazvo:
Iko kune zvakare ChiPutukezi fungidziro kutsanangura kuti zita reCuba rinobva kupi, kunyange hazvo parizvino risingatariswe Zvinoenderana nedzidziso iyi, izwi rekuti "Cuba" rinobva kuguta riri kumaodzanyemba kwePortugal rine zita iro.
Chiumbwa cheColumbus mutaundi rePutukezi reCuba
"Cuba" yePortugal iri mudunhu re Lower Alentejo, padyo neguta reBeja. Ndiyo imwe yenzvimbo dzinoti nzvimbo yekuzvarwa yaColumbus (pachokwadi pane chifananidzo cheakafumura mutaundi). Pfungwa inotsigira dzidziso iyi ndeyekuti ndiye angave akabhabhatidza chitsuwa cheCaribbean mukurangarira nyika yake.
Kunyangwe iri yekufungidzira yekufungidzira, haina nhoroondo yakaoma.
Kunyanya kusanzwisisika kupfuura yapfuura, kunyangwe iinewo vamwe vatsigiri. Maererano naye, zita repamusoro «Cuba» ingangove mutsauko we izwi reArabic koba. Izvi zvaishandiswa kuratidza mamosque akavezwa nepamusoro.
Dzidziso yeArabhu yakavambwa panzvimbo yekumhara yaChristopher Columbus, iyo Bariay bay, parizvino ari mudunhu reHolguín. Ikoko kwaigona kuve kuve kwakapeteredzwa zvimiro zvemakomo padyo nemahombekombe izvo zvaizoyeuchidza mufambisi weiyo yeArab kobas.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Cuba uye nekwakabva zita rayo
Masipire akajairika eMoroccan uye madhiri
Maruva eBrazil ari munjodzi yekutsakatika